नया नौलो | Rochak Khabar
नया नौलो 
गोत्र के हो ? गोत्रमा विवाह गर्दा के हुन्छ ? जान्नुहोस !
गोत्र शब्दको अर्थ हो बंश/कुल । गोत्र प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि ब्यक्तिको प्रचीनतम ब्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । उदाहरणको लागि कुनै पनि ब्यक्तिको गोत्र भरद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो है त्यो ब्यक्तिको बंश वैदिक ऋषि भरद्वाजबाट शुरु भएको हो ।...
24 Dec, 12:09 PM
स्त्रीलाई यी ३ कुरा भुलेर पनि नभन्नुस्
गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ । डेली मेलमा प्रकाशित शोधका अनुसार महिलाको मुड र उनीहरुको प्रजनन क्षमताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।...
22 Dec, 10:35 AM
चुरोट छाड्न चाहनुहुन्छ, अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय !
धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ। विश्वका धेरै मानिसलाई यो थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरु धुमपान गर्छन्। चुरोटको लत छाड्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यहीभएर पनि मानिसले चाहेर पनि धुमपान गर्न छाड्न सकेको हुँदैन।
18 Dec, 03:43 AM
साउदी जादै हुनुन्छ, सबै भन्दा पहिला जान्नुहोस यी कुरा हरु अहिले नेपालका अधिकांश युवाहरु पैसा कमाउन खाडी मुलुक जाने गरेका छन्। मलेसिया, कतार, ओमान, साउदी अरब, दुबइ प्रमुख गन्तव्यमा पर्दछन्। उनीहरुको मुख्य रोजाइ भनेको साउदी नै हुने गरेको छ। तर साउदिमा गएपछि उनीहरुले धेरै समस्याहरु आउने गरेका छन्। किनकी उनीहरुको...
12 Dec, 12:55 PM
सफल जीवन बनाउने ७ टिप्स यस्ता छन्,एकपटक पढ्नै पर्ने सफलता सबैको चाहना, यहाँ सबैजना सफलहुन चाहन्छन् । यद्यपि सफलताको बाटो त्यति सहज छैन तर सम्भव भने पक्कै छ । कडा परिश्रम पछि सफलताप्राप्त गर्न सकिन्छ, कहिले काहीँ परिश्रमसँगै बाटोमा थुप्रै हतोत्साहीत गर्ने खालका नैरश्यता, पिडा एवम् उदाशिनताहरु भेटिन्छन् ।
11 Dec, 03:41 AM
किन टिक्दैन कपालमा मेहदी ?
धेरैले कपालमा मेहदी प्रयोग गर्छन् । मेहदी प्रयोग गर्नेहरू कपाल फुल्न थालेका पाका व्यक्ति नै बढी हुन्छन् । तर, अधिकांशको गुनासो हुन्छ, कपालमा मेहदी नै टिक्दैन ।
24 Nov, 03:34 AM
कपडामा चुइगम टाँसियो ? यहाँ छन् हटाउने पाँच तरिका
चुइगम चपाउने धेरैको बानी हुन्छ । तर, चुइगम चपाउनु जति आनन्ददायक हुन्छ, त्यसको रस सकिएपछि व्यवस्थापन गर्नु त्यति नै झन्झट हुन्छ । यस्तोमा धेरैले चुइगम जहाँ पायो त्यहीँ फाल्ने या टाँसेर छाडिदिने गर्छन् । यस्तो चुइगम कपडामा टाँसिएमा हटाउन भने निकै नै समस्या...
24 Nov, 03:26 AM
दाह्री राख्नुका हुन्छन यी फाइदा, जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ? (एस्तो छ बैज्ञानिक कारण)
पुरुषहरुले विशेषगरी आफ्नो दाह्री फेसनको रुपमा राख्ने गर्दछन् । तर यसको पछाडि केही वैज्ञानिक कारण पनि छ जसले तपाईंलाई विभिन्न फाइदा पनि पुर्याउँछ । यदि पुरुषले एक उमेरपछि दाह्री राख्न सुरु गरे छालासम्बन्धि थुप्रै समस्या कम हुने गर्दछ । यहाँ दाह्री राख्नुका...
16 Nov, 03:39 AM
के तपाईलाई अण्डा उसिन्न आउँछ त ?
उसिनेको अण्डा खाने गर्नु भएको छ ?
अण्डालाई उमाल्ने पनि तरिका हुन्छ। तपाईलाई अण्डा उमाल्न आउँदैन भने यो सामाग्री तपाईका लागि हो। विचार नपुर्याई अण्डा उमालेर खाँदा त्सयमा भएका पौष्टिकता समाप्त हुन सक्छन्।
अमेरिकी लेखक तथा सेफ जे केन्जी लोपेज एल्टले चर्चित क...
16 Nov, 03:10 AM
सबै श्रीमान् यस्तै हुन्छन् त ? हेर्नुहोस् श्रीमान्का ७ वटा बानी
ध्यान दिने कुरामा पनि मतलब नै नगर्ने बानी श्रीमतीहरुलाई आफ्नो श्रीमानको सबैभन्दा नराम्रो बानी लाग्नसक्छ । साना कुराले विवाहित जोडिमा झगडा पैदा हुनसक्छ ।
9 Nov, 03:18 AM
डरलाग्दा सपना देखिनुको रहस्य यस्तो पो छ !
डरलाग्दो सपना देखेपछि मानिस पसिना–पसिना भएर ब्युँझन्छन् पनि । तर, त्यस्ता डरलाग्दा अथवा नराम्रो सपना बिरामी हुने संकेत पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । 0
9 Nov, 03:15 AM
यी कुरा हरु केटीहरुलाई पटक्कै मनपर्दैन जनिराखौ हालै गरिएको एक अध्यनले स्त्रीहरुको विषयमा रोचक जानकारी बाहिर आएको छ । ५००० महिलामाथि गरिएको यो अध्यनका क्रममा विश्वभरीका अधिकाँश महिलाले ६ शब्द सुन्न मन पराउँदैनन् । याहू हेल्थका अनुसार अबर्लिन कलेजमा भाषा विज्ञानका शोधकर्ता पल टिबडो र उनको टिमले गरेको अध...
6 Nov, 02:38 AM
एस्तो छ एउटै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने कारण गोत्र शब्दको अर्थ हो बंश/कुल । गोत्र प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि ब्यक्तिको प्रचीनतम ब्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । उदाहरणको लागि कुनै पनि ब्यक्तिको गोत्र भरद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो है त्यो ब्यक्तिको बंश वैदिक ऋषि भरद्वाजबाट शुरु भएको हो ।...
6 Nov, 02:34 AM
यस्ता ५ गुण हुने केटाप्रति केटी आकर्षित हुन्छन्
मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषको बाह्य आकर्षणका साथै आन्तरिक क्षमता तथा स्वभाव महिलाहरुको छनोटको मुख्य कसी बन्दछ । केटाहरुमा हुनुपर्ने गुणहरु के के हुन् ? जसलाई युवतीहरुले मन पराउँछन् । यस्ता गुण भएका युवकप्रती केटी आकर्षित हुन्छ ।
2 Nov, 01:47 AM
शास्त्र भन्छ – शनविार यि ७ बस्तु किन्दै नकिन्नुस जसले दशा र गरीबी निम्त्याउछ
हप्ताको सातै दिनभरीमा शनिवारलाई सबैभन्दा रमाइलो अनि आरामदायी दिन मानिन्छ। अनि यो दिनमा कोहि घरमै बसेर आराम गर्छन्, कोहि चाहिँ आफ्ना घर(परिवार, साथीभाईसँग बाहिर घुम्न या रमाइलो गर्न निस्कन्छन् भने कोहि चाहिँ सपिङ्ग गर्न बजार चहार्छन्।
29 Oct, 05:45 AM